2019-10-02 13:36:07 , ကဲ…သီတင်းကျွတ်အထူးပရိုမိုးရှ…
ကဲ…သီတင်းကျွတ်အထူးပရိုမိုးရှင်း​တွေ လာပြီ​နော် ???
ကမ္ဘာ့​ရွှေ​ဈေးအတတ်အကျ၊ ​ဒေါ်လာ​ဈေးအတတ်အကျ​တွေကို အ​ရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး စီးပွား​ရေးတစ်ခုအဖြစ်ဝင်​ငွေရှာနိုင်တဲ့ Forex ​ဈေးကွက်အ​ခြေခံသင်တန်းကို အထူးပရိုမိုးရှင်း​တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်​တော့မှာပါ
အချိန်အများကြီးလဲ​ပေးစရာမလို၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွား​ရေးတစ်ခုလဲထူ​ထောင်နိုင်မယ်၊ အချိန်နဲ့အမျှ မိမိရဲ့ဝင်​ငွေလဲတိုးပွားလာမယ်၊ အကျိုးအမြတ်လဲရမယ်၊ လက်ရှိစီးပွား​ရေးရှိ​နေရင်လည်း ဒုတိယလုပ်ငန်းအ​နေနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်
သင်တန်းပြီးလို့ တကယ်တတ်​မြောက်သွားတဲ့အခါမှာ မိမိဘဝအတွက် ​နေ့စဉ်ဝင်​ငွေတစ်ခုအ​နေနဲ့ ပုံမှန်ရှာ​ဖွေနိုင်မယ်၊ ဖုန်း (ဒါမှမဟုတ်) လပ်​တော့ပ်တစ်ခုရှိရုံနဲ့ အ​ရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး ဝင်​ငွေ​ကောင်း​ကောင်းရရှိနိုင်မယ်
Forex ​ဈေးကွက်ဟာဆိုရင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအများဆုံးနဲ့ ​ငွေဖြစ်အလွယ်ဆုံး​ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ​ဈေးကွက်အတွင်းတစ်​နေ့တာ​ငွေလည်ပတ်မှုနှုန်းဟာဆိုရင် 5.6 ထရီလီယံ​ကျော်ရှိပါတယ် ဒီ​ဈေးကွက်ထဲမှာ အဓိက​ရောင်းဝယ်​နေတာ​တွေက​တော့ ကမ္ဘာ့​ရွှေ​ဈေးနှုန်း​တွေနဲ့​ငွေ​ကြေး​ဈေးနှုန်း​တွေပါပဲ
ဒီဈေးကွက်ကို စိတ်ဝင်စားသူ​တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်နဲ့မန္တ​လေးတို့တွင် Forex Trading Beginner Course ကို စာ​တွေ့​ရောလက်​တွေ​ရော သင်ကြား​ပေးသွား​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
✅အချိန်နဲ့အမျှ မိမိဝင်​ငွေကို တိုးပွားချင်ကြသူများ
✅​Secondry Business အ​နေနဲ့ လုပ်ကိုင်လိုသူများ
✅အိမ်မှာပဲ ထိုင်​နေပြီး ဝင်​ငွေရှာလိုသူများအ​နေနဲ့ သင့်​တော်တဲ့
✡သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက် – 26.10.2019 မှ 30.10.2019 အထိ
✡သင်တန်းချိန် – ​နေ့လည်1:00 မှ 4:00 အထိ
✡သင်တန်း​ကြေး – 100,000 ကျပ်
– 30% discount
– 20 % discount
– 10% discount
လိပ်စာ။ ။ အမှတ် 138/142, White Cloud Condo, Unit 4C, သိမ်ဖြူလမ်း, ရန်ကုန်။
Aye Myat Thwin
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-02 by admin.
← 2019-10-01 18:11:31 ,ေ​အာက်​တိုဘာလအတွက် အသိပညာဘူဖေး… 2019-10-04 14:29:39 , ကဲ…သီတင်းကျွတ်အထူးပရိုမိုးရှ… →